Waa maxay keydka bangiga iyo shaqooyinkiisa | Dhaqaalaha
Waa maxay keydka bangigu
2 Keydka bangiga iyo shaqooyinkiisa
3 Xargaha sare
4 Maxaa nidaamkan loo adeegsadaa?
5 Tusaalaha tan waa kuwan soo socda
6 Noocyada xargaha
7 Waa maxay sababta bangigu uusan u soo celin karin lacagtayda?
7.1 Ayaa u xilsaaran dejinta shuruudaha keydka
8 Sidee dhab ahaan bangiga u keydiyaa shaqadiisa iyadoo lagu saleynayo xeerarka bangiga dhexe
Keydka bangiga iyo shaqooyinkiisa
Markaad kahadasho keyd dalku leeyahayWaxaan tixraaceynaa boqolkiiba wax soo saarkeeda oo ay tahay in la qaboojiyo si loo helo qabashada dadweynaha. Dhaqaalaha gudahiisa waxaan ku muujin karnaa kuwan sida bangiga dhexe uu ku sameeyo lacagta; Markuu bangiga dhexe isticmaalo kayd, wuxuu u sameeyaa si loo kordhiyo ama loo dhimo tirada lacagta ee lagu haysto gudaha dalka.
Markaad leedahay nooca xargaha oo u janjeera inuu kacoHay'adaha dalka waxay bilaabaan inay yeeshaan ilo dhaqaale si ay u sameeyaan amaah ama amaah nooc kasta ha noqdee; Tani waxay ka dhigan tahay in tirada boos celintu ay ka sii badan tahay.
Qiyaas ahaan, Bangiga Dhexe wuxuu damaanad qaadi karaa bangiyada lagu maamulo nidaamkan oo ay u hoggaansamaan heerarka loo tilmaamay; waxay had iyo jeer heli doonaan raasamaal ku filan oo ay ku awoodaan inay amaahdaan markii loo baahdo.
Maxaa nidaamkan loo adeegsadaa?
Waa nidaam wax ka qabta lacag soo uruuri si aad u awoodo inaad amaahiso hadhow waxayna ku saleysan tahay mala-awaal suuqa ah. Mar haddii ay lacag soo ururisay, bangigu waa inuu keydiyaa qayb yar oo mid kalena u adeegsadaa inuu lacag ku socdo, qaybtaas yar ee bangigu keyd u yahay waa bangiga kaydka ah.
Tusaalaha tan waa kuwan soo socda
Si aad wax yar uga sii fahanto, waxaan soo qaadaneynaa tusaale fudud. Bangigu wuxuu qabtaa macmiil xisaab furan ku fura hal milyan oo yuuro. Milyankaas euro, bangigu wuxuu isticmaali doonaa qayb si uu awood ugu yeesho maalgashiga; laakiin ma isticmaali kartid milyanka buuxa sidaa darteed waxa ugu caafimaadka badan ayaa ah inaad keydiso 150.000 oo Yuuro oo ah keyd bangi.
Xadhigga dhexdiisa, waxaa jira kuwo kala duwan noocyada xargaha. Markasta oo ay sii yaraato badeecada maaliyadeed, ayaa sareysa shuruudaha keydka; maxaa yeelay taasi waxay ka dhigan tahay in waqti kasta oo qofku uu bangiga weydiisan karo lacag waana inay ka jawaabtaa.
Tani waa mid ka mid ah kiisaska ugu badan ee hubinta akoonnada, maaddaama qofku u baahan yahay inuu haysto lacagtaas wakhti kasta si loogu isticmaalo lacag-bixintiisa maalinlaha ah iyo bangigu waa inuu siiyaa iyaga markay u baahdaan.
Bangiyada badankood waxay doorbidaan inaysan isticmaalin lacagta ka soo baxda koontooyinka si ay u maalgashadaan mana bixiyaan dulsaar xisaabaadka noocan ah, maadaama ay tahay lacag aysan la shaqeyn karin oo aadan iska tuuri karin.
Goorma xadhigga kursiga keydka ayaa aad u hooseeyaTani waxay u horseedi kartaa kalsooni darro gaar ah qofka dhigta keydkooda halkaas, maadaama ay jirto ixtimaal sare oo ah inay awoodi waayaan inay lacagtooda dib ula soo noqdaan.
Waa maxay sababta bangigu uusan u soo celin karin lacagtayda?
Tani maahan wax caadi ah, gaar ahaan xisaabaadka hadda jira sida aan uga faallaynay qaybta sare. Si kastaba ha noqotee, aynu ka fikirno in bangigu leeyahay keyd bangi oo aad u weyn oo uu bilaabo inuu maalgeliyo dhammaan lacagta macaamiishiisa. Dadka keydkooda dhigay halkaas, waxay rabaan inay dib ula soo noqdaan lacagtooda, si kastaba ha noqotee bangigu ma siin karo xitaa haddii uu doono, maadaama lacagtaas loo isticmaalay in lagu sameeyo maalgashi oo aan la helin. Haddii bangigu lahaa heer kayd oo sarreeya, tani ma dhici lahayd maadaama ay lahaan lahayd xisaab-celin ku filan oo ay lacagta u siiso dadka weydiistay xilligaas oo inta soo hartay ay la soo noqoto maal-gashiga.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo daqiiqad ka mid ah fowdo maaliyadeed iyo dadka oo dhan waxay rabaan inay lacagtooda kala baxaan waqti isku mid ah, waxay geli lahayd burbur bangi taas oo sheegtay in bangigu aanu yeelan doonin xallinta lagama maarmaanka u ah in lacagta la siiyo dhammaan dadka dalbanaya iyada oo xilliganna, badbaadin dhaqaale oo baanka dhexe ah ama ku biirista bangiga oo leh mid ka ballaadhan uu geli doono, in kasta oo doorashada labaad waxay ku lug leedahay waqti aad u dheer waxayna dhacdaa oo keliya markay bangiyada kacaan.
Ayaa u xilsaaran dejinta shuruudaha keydka
Bangiga dhexe ayaa mas'uul ka ah bixinta banki kasta shuruud dhigaal ah. Bangiga dhexe ee la yiraahdo wuxuu awood u leeyahay inuu ku sameeyo hay'adaha dowliga ah ama nooc kasta oo hay'ad gaar loo leeyahay.
Waa imisa boqolkiiba kaydadka ay tahay in loo haysto keyd uu sheegay Bangiga Dhexe
Xadhigga hay'ad dawladeed la mid maaha hay'adda gaarka loo leeyahay.
Hay'adaha gaarka loo leeyahay, waa inay lahaadaan hal keyd oo ah 2% wadarta guud markay noqoto
1. Debaajiga iyo dhigaalka
2. Dammaanadaha ka diiwaan gashan suuqa saamiyada
Markay tahay hay'adaha dawladda, waxa la aasaasay waa kayd keliya oo ah 4% nooc kasta oo ururinta ama dhigaalka ah oo la sameeyo, marka lagu daro dammaanadaha ka diiwaangashan suuqa saamiyada.
Maxay yihiin tilmaamaha ay tahay in la raaco marka hawsha dareeraha ay dhacdo
Marka ay hay'aduhu ku jiraan habka dareeraha, iyagu ma laha nooc kasta oo waajibaad ah marka ay timaado buuxinta shuruudaha kaydka, maadaama aan loo baahnayn u hoggaansamida noocan ah.
Goorma koontada looga baahan yahay keydku waxay ku jirtaa xarun ku taal bangiga dhexe, sida ay tahay in loo aasaaso
Hay'adaha gaarka loo leeyahay. Waa inaad haysataa 100% yuuro iyo in dhammaan hay'adaha gaarka loo leeyahay ee meesha kujira ay koonto ku leeyihiin bangiga dhexe.
Waa inaad haysataa ilaa 75 ka mid ah dib u bixinta alaabada maaliyadeed ee laga soo saaray bangiga dhexe muddo ka yar hal sano
Hay’adaha dawliga ah. Waa inaad haysataa ugu yaraan 05% lacag caddaan ah iyadoon loo eegin waxa ka dhex jira kaydadka xisaabaadka.
Boqolleyda harsan illaa 4% ee ay tahay in hay'adaha dowliga ah ay dhameystiraan, waxay noqon doontaa shahaadooyinka maalgashiga keydka ah ee uu soo saaray bangiga dhexe iyadoo dib loo soo celinayo wax ka yar hal sano.
Sidee dhab ahaan bangiga u keydiyaa shaqadiisa iyadoo lagu saleynayo xeerarka bangiga dhexe
Marka ay bilaabato inay kici kayd ahaan, tiro badan oo hay'ado ah waxay bilaabaan inay yeeshaan xusuus yar si ay ugu awoodaan inay ku siiyaan dhibco ama amaah dadka u baahan. Tan macnaheedu waa in hay'adahaani waa inay ka baxaan raasumaal weyn oo keyd ah si ay u awoodaan inay u daboolaan kharashaadkooda iyo amaahda inta lagu jiro waqtigan. Markay taasi dhacdo, waxaa jira wax badan oo lacag ah oo dadka la amaahdo iyo lacag aad u tiro yar oo wareegaya, taasoo keentay hoos u dhaca xisaabaadka.
Waqtigan xaadirka ah ee bangiga dhexe hoos u dhigayo boqolkiiba shuruudaha keydka, bangiyada ayaa mar kale leh xallinta dhaqaalaha waxayna u oggolaanayaan inay mar kale amaah siiyaan shirkadaha iyo bangiyada heer qaran. Tani waxay ka dhigeysaa dadku inay bilaabaan inay haystaan ​​lacag aad u badan oo lacag ah oo ay amaahdaan iyo qadarka lacagta ee la soo saaray ay bilaabeyso inay qulqulaan.
Jaantuskan waxaad ku arki kartaa wax yar oo kafiican waxa aan ula jeedno
Bangiga Dhexe gudahiisa, qodobada soo socda ayaa lagu go'aamiyay in dhammaan hay'adaha ay tahay inay u hoggaansamaan
1- Waa in la go’aamiyaa waxa dulsaarka ugu yar ee kaydka ah ee ku jira wixii sharci ah iyo maxay yihiin heerarka keydka ee ay tahay in la dejiyo.
2- Waa in la xakameeyo in bangiyada iyo hayadaha oo dhami ay u hogaansamaan nooca shuruudaha keyd ee la dejiyey hadii ay sidaa yeeli waayaanna, bangiga dhexe wuxuu cunaqabateyn ku soo rogi karaa hay’ado aan ku jirin qaab sharciyeed.
3- Bangiga Dhexe wuxuu go'aamiyaa waa kuwee shuruudaha keydka ee ay tahay in la buuxiyo lana hubiyo in qof walba u hogaansamo.
4- Bangiga Dhexe waa midka go’aamiya waajibaadka saaran mid kasta oo ka mid ah baananka waa inuu lahaadaa marka la samaynayo shuruud keyd ah.
5- Waxay dejisaa taas oo ah xisaabinta dalabka xargaha oo waliba bara habka.
6- Waxaad amar ka bixisaa qodobbada ay tahay inay warbixin ku jirto marka aad soo bandhigeyso shuruudaha la sheegay.
7- Wuxuu soo saaraa xeerarka guud ee ku habboon waa inuu lahaadaa heer siyaasadeed.
Maxay yihiin saameynta ugu weyn ee shuruudaha keydka ee uu dejiyay Bangiga Dhexe
1. Kaydka la siinayo macaamiisha bangiyada mid walba sifiican ayaa loo kontaroolaa oo amniguna sarreeyaa.
2. Waxaa jira xaddi badan oo xisaabeed.
3. Waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee lagu xakameyn karo lacagta dal.
4. Waa suurtagal in la xakameeyo taas oo ah ballaadhinta dhibcaha deyn kasta.
5. Kala duwanaanshaha qiimaha ayaa bilaabi kara in lagu dabaqo
6. Waxay saamayn ku yeelan kartaa keydka qaranka haddii aan si wanaagsan loo xakamayn
7. Waxay dalka gelin kartaa khatar haddii aan si sax ah loo maamulin shuruudaha keydka.
Noocyada Bangiyada iyo shaqooyinkooda kala duwan
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Banca » Waa maxay keydka bangigu
Cagaarka orsada: cawaaqibka Brexit
Sidee uga faa'iideysan kartaa kaararka fasaxa?